Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Bahamas » Inona no vaovao any The Bahamas amin'ny Jolay
Vaovao Mafana Bahamas • Vaovao Mafana • Karaiba • culinary • Kolontsaina • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao lafo vidy • Vaovao • Resorts • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Vaovao isan-karazany
Eo am-piomankomanana tanteraka ny fahavaratra any Bahamas, ary manafana ny traikefa nahafinaritra manerana ny toerana 16 nosy tsy manam-paharoa miaraka amin'ny fomba mora lavitra kokoa hahatongavan'ireo mpandeha hitsidika ny morontsiraka.
Ny chef James Beard enina enina Marcus Samuelsson, mpandresy nahazo loka enina, dia hisantatra ny trano fisakafoanana vaovao, Baha Mar Fish + Chop House, ao amin'ny Baha Mar amin'ny 12 Jolay.
Grand Bahama Island dia manolotra Dive Grand Bahama.
Hotely fandraisam-bahiny, spa ary nosy tsy miankina any Nassau, Sandals Royal Bahamian Sandals Royal Bahamian, dia nanambara ny datin'ny fisokafan'ny 27 Janoary 2022.
Ny fialan-tsasatra fanasitranana dia fanariam-bato fotsiny amin'ny alàlan'ny fifampiraharahana sy traikefa tsy maintsy tsidihina mba hankafizanao.
Baha Mar dia mandray ny trano fisakafoanana vaovao an'i Marcus Samuelsson - Chef mpandresy nahazo an'i James Beard inenina, Marcus Samuelsson, no hisantatra ny trano fisakafoanana vaovao, Trondro Baha Mar + Trano Chop, ao amin'ny Baha Mar ny 12 Jolay, mamelona ireo akora farany eto an-toerana sy hazan-dranomasina Bahamian, feno efi-pisakafoanana mamy sy fisotroana cocktail an-tampon-trano.
Hetsika Grand Bahama voalohany hisitrika voalohany - Manolotra ny Nosy Grand Bahama Mandrosoa Grand Bahama, fivoriana mandritra ny dimy andro an'ny Bahamas Dive Ambassadors, izay samy manana mari-pahaizana isan-tsokosoko anaty rano sy mpandraharaha eo an-toerana, nanomboka ny 19-23 Jolay 2021. Ireo toerana antsitrika izay mampientam-po dia misy sambo, vatohara ary fihaonan'ny antson'ny vatoharan'i Karaiba.
Sandals Royal Bahamian dia manitatra ny tetikasa fanavaozana - Hotely fandraisam-bahiny, spa ary nosy tsy miankina any Nassau, Sandals Royal Bahamian, nanambara ny daty hisokafan'ny 27 Janoary 2022. Ireo endrika fanavaozana an-tapitrisany dolara mitohy Zavamanana, faritra malalaky ny efitrano fandraisam-bahiny izay manitatra ny vibe amoron-dranomasina mankany afovoan-tanàna.
Fanafanana Graycliff - Mahazo fankalazana roa malaza amin'ny asa fanompoana miavaka, Hotely Graycliff nohajaina tamin'ny 33rd taona nifanesy niaraka tamin'ny Loka lehibe in Mpijery divay 2021 Loka fisakafoanana ary nanjary orinasa voalohany tany The Bahamas nahazo ny tombo-kase momba ny fahasalamana mpitsangatsangana ho an'ny "fizahantany azo antoka kokoa ara-pahasalamana" nataon'ny maso ivoho misahana ny fahasalamana any Karaiba.
Southwest Airlines dia nanambara ny sidina azo alefa mankany Nassau - Southwest Airlines nanamafy ny fiverenan'ny sidina isan'andro mankany Nassau avy amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Fort Lauderdale-Hollywood ary serivisy faran'ny herinandro avy any amin'ny Seranam-piaramanidina iraisam-pirenenan'i Baltimore / Washington International Thurgood Marshall manomboka ny 7 sy 9 Oktobra.
Royal Caribbean Adventure an'ny Seas Homeports any The Bahamas - Volana lasa, Fitsangatsanganana an-dranomasina nahavita ny lanonam-panambadiana voalohany tao amin'ny Nosy Grand Bahama. Manolotra fitsangatsanganana hafitoana avy any Nassau izao, ity traikefa ity dia misy fientanam-po roa andro an-damosina ao amin'ny Perfect Day ao CocoCay ary andro iray fialana sasatra amin'ny morontsiraka fotsifotsy any Grand Bahama isaky ny sabotsy mandritra ny fahavaratra.
MSC Cruises dia mamerina amin'ny laoniny ny fandehanan-tsambo amerikana - MSC Cruises dia nanambara ny fandefasana indray ny sambo an-tsambo any Bahamas ao anaty sambo MSC Divina manomboka ny 16 septambra 2021. Ny sambo no hiantsona ao amin'ny nosy Bahamian manokana, Ocean Cay MSC Marine Reserve. famandrihana dia azo alaina izao.
Raha mila lisitra feno momba ny fifampiraharahana sy fonosana ho an'ny The Bahamas, tsidiho www.bahamas.com/deals-packages.
Birao fampiroboroboana ny nosy Bahama Out Islands $ 250 - Mpandeha amerikana sy kanadiana dia afaka manoratra fonosana fialan-tsasatra mandritra ny efatra alina na mihoatra ao amin'ny iray amin'ireo hotely fandraisam-bahiny fampiroboroboana Bahama Out Islands izay mandray anjara ary mahazo $ 250 ny trosa an'habakabaka. Fikandrana famandrihana: izao - 31 Jolay 2021.
Fankalazana ny Fetin'ny Fahaleovantena Bahamianina miaraka amin'i DJ Kid Fresh –Mankalazà Fetin'ny fahaleovantena Bahamian miaraka amin'ny iray amin'ireo mpanakanto be mpitady indrindra any South Florida, DJ Kid Fresh, 9-11 Jolay 2021. Ny fonosana dia manomboka amin'ny $ 478 isan'olona ao anatin'izany ny fitaterana mandritra ny dia lavitra, ny Hotely Hilton, fidirana amin'ireo hetsika ao amin'ny Hotely Hilton ary fidirana amin'ny Resorts World Bimini Beach.
Fiasan'ny finamanana amin'ny teti-bola –Raha mitady trano lavitra ny trano ianao amin'ny asanao manaraka mankany The Bahamas, aza mitady lavitra intsony! Bell Channel Inn dia manome sarany isam-bolana sy telovolana ho an'ny dia izao hatramin'ny 31 Desambra 2021.
Fonosana maharitra mijanona ao amin'ny paradisa - Mametraha fonosana maharitra mijanona ao Paradise Cove Beach Resort ary mahazo 40% amin'ny taham-bola isan'andro. Ny varavarankelin'ny famandrihana dia hatramin'ny 31 desambra 2021 izao.
Fanambadiana akaiky ho an'ny roa ao amin'ny Exumas - Sorohy ny adin-tsaina amin'ny fikasana fanambadiana amin'ity taona ity; avelao ny Embrace Resort hikirakira ny andronao lehibe ary hampiantrano a lanonana tsotra nefa akaiky miaraka amin'ireo olon-tianao hafa manan-danja sy vitsivitsy. Manomboka amin'ny $ 2,399 ny vidiny, miaraka amin'ny fehezam-boninkazo fampakaram-bady, minisitra na fitsarana ny fandriampahalemana sy ny sary ho an'ny rakikira fampakaram-badinao.
Miaraka amin'ny nosy sy cay maherin'ny 700 ary nosy itodiana tsy manam-paharoa 16, i Bahamas dia 50 kilaometatra monja miala ny morontsirak'i Florida, izay manome sidina mora manidina izay mitondra ny mpandeha lavitra ny andavan'andro. Ny nosy Bahamas dia manana jono, antsitrika, sambo an-tsambo, fanaovana vorona, ary karazan-javaboary manerantany, kilometatra an'arivony maro amin'ny rano mahavariana indrindra eto an-tany sy ny morontsiraka madio miandry ny fianakaviana, mpivady ary mpitsangatsangana. Jereo ny nosy rehetra atolotra ao www.bahamas.com na ao amin'ny Facebook, YouTube or Instagram hahitanao hoe maninona no Tsara kokoa any The Bahamas.